21282r mpanadio banga tsy misy tariby - Goodao Technology Co., Ltd.
21230, 90W Fiara fanadiovana...
11632, inflator kodiarana fiara 12V
21282r mpanadio banga tsy misy tariby
1) Powerd by 7.4V2000mAH Li-ion Battery;
2) USB charger tafiditra;
3) Home Vacuum kilasy hypa sivana.
4) Feo ambany kokoa
5) misy sifotra iray
1) Fitaovana ABS.
2) Switch on/off
3) esory mora ny fako ary sasao sivana.
4) Fonosana: 51*38.5*55cm, 16pcs/ctn, 15/14Kgs
ara-nofo ABS, PS, Varahina
Haben'ny vokatra 36*10.5*15cm
Fikoriana mitsoka 2.5
Suction Media lena sy maina
Hery naoty 12V60Watt ho an'ny banga, 12V10A ho an'ny inflator kodiarana
Herin'aratra 3m miaraka amin'ny adaptatera jiro sigara fiara, 12V DC ilaina
Piston & Cylinder 19mm, fomba klasika
Hafainganam-pandrosoana Appr, 7-9mins (195/60R14 avy amin'ny 0-30PSI)
Accessories 1 adaptatera suction, 2 nozzles & 1 neeles ho inflating, 1 hose rivotra misy gauge
Fonosana ivelany 45.5*38*47CM, 12pcs/ctn, 16/15kgs
Ny milina dia tsy azo ampiasaina amin'ny kamiao lehibe;
Raha miakatra haingana ny tsindrin-drivotra ao anatin'ny fotoana fohy (hatramin'ny 689KPa ao anatin'ny telo segondra), dia midika izany fa voasakana ny tsindry ary tsy miditra ao anaty kodiarana ny rivotra. Vonoy avy hatrany ny herinaratra, esory ny nozzle rivotra, ary avereno miasa;
Inflate isaky ny 15 minitra, tsara kokoa ny miala sasatra;
Tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny fampidirana herinaratra maivana sigara 12V;
1. Tonga miaraka amin'ny jiro sigara, izay azo ampiasaina rehefa mifandray amin'ny sigara;
2. Fitaovana amin'ny isan-karazany inflatable nozzles, izay azo ampiasaina mba inflate ny kodiaran'ny fiara, bisikileta, sy ny môtô, ary koa ny baolina sy fingotra sambo;
Maro ny olona tsy mahafantatra ny fomba fijery ny fandrefesana ny fanerena kodiarana, anisan'izany ny peratra mena ivelany amin'ny fandrefesana kodiarana izay ao amin'ny kilao isaky ny metatra toradroa. Ny kilao/square centimeter amin'ny boribory anatiny mainty dia 2.2 na 2.8, sns., izay midika fa mihoatra ny ampy ny isa mainty ao amin'ny faribolana anatiny. Raha te hahalala ianao dia jereo amin'ny antsipiriany ireto manaraka ireto:
Ny faribolana ivelany mena dia ny imperial unit psi (pounds/square inch), ny unit mainty amin'ny faribolana anatiny dia kg/cm^2 (kg/square centimeter), ary ny singa manara-penitra ao amin'ny rafitra iraisam-pirenena dia N/m. ^2 (Newton/square M), izany hoe Pa (Pascal).
3. Ny tsindrin'ny atmosfera mahazatra dia manodidina ny 1.01*10^5 Pa, izany hoe 10.1 Newton/cm², izany hoe 1.03 kg/cm². Raha lazaina amin'ny teny tsotra, ny tsindry amin'ny atmosfera mahazatra dia ny toeran'ny mainty 1 amin'ny famantaranandronao. Raha ny marimarina kokoa dia tokony avadika ho unit britanika amin'ny 1.03 eo amin'ny fiambenanao. 1 kg = 15 PSI
1. Ampidiro mivantana ao amin'ny valva kodiarana ny valva ambony amin'ny fantsona fingotra. Rehefa mandre ny feon'ny fihemorana ny kodiarana dia midika izany fa nivezivezy ny rivotra. Tsindrio avy hatrany ny fantson'ny valva ao anaty 90 degre, ary ny rivotra dia tsy hiala intsony;
2. Esory ny plug ary ampifandraiso ny jiro sigara;
3. Alefaso ny motera hanombohana ny fisondrotry ny vidim-piainana;
4. Rehefa miakatra ny tondro dia manomboka miakatra miaraka amin'ny fanerena rivotra ny tondro, ary rehefa mahatratra ny fanerena pneu sahaza ny fiara ny tondro lehibe (amin'ny ankapobeny, ny fanerena pneu ny fiara dia 193-241KPa), esory ny plug sy ny rivotra. nozzle.
teo aloha: 21268, 4 amin'ny 1 12V fiara mpanadio banga misy rivotra sy hazavana
Manaraka: 11632, inflator kodiarana fiara 12V
Vacuum Cleaner Seza fiara
Vacuum Cleaner amin'ny fiara
Vacuum Cleaner fiara
Fiara Vacuum Cleaner Handheld
Fanadiovana fanasan-damba fiara
21230, 90W Car Vacuum Cleaner sy Inflator
21256D, 4 in 1 12V fiara mpanadio banga miaraka amin'ny Digi ...
21282 mpanadio banga fiara